umshini wokukhiqizwa kwezinhlanzi wokuphakelwa kwentengo yemishini yokuphaka izinhlanzi ezintantayo
♦ feed yokuchoboza
uma izinto zakho zokusetshenziswa zingekho ku-powder,udinga a feed crusher,Ukuphrinta impahla kungathuthukisa ukuqina kwamanzi kanye nokugaya ukudla kwepellet. I-diesel feed yethu yesando semishini kanye nogesi wokuphehla isando se-hammer kunganelisa izidingo zakho zentambo yezinhlanzi ezincane zokuphaka izinhlanzi. Futhi singanikeza ngemishini yokuchotshozwa komugqa omkhulu wokukhiqiza izinhlanzi wepellet.
♦ Ukuxuba okuphakelayo
Ukuxuba yinqubo enkulu yokuqinisekisa ikhwalithi nokuthuthukisa umphumela wokuphakelayo. Sinikezela ngokuxuba okuhlanganisiwe kwe-ribbon ukuxuba izithako zokudla kwezinhlanzi, engaxuba ngokulinganayo. Ukulayisha okuhle kakhulu, indawo encane yaphansi, i-mixer isetshenziswa kabanzi kwisitshalo sokuphakelayo.
♦ Ukukhiqizwa Kwezinhlanzi Zokudla
Umshini wethu wokukhiqiza izinhlanzi ungahlukaniswa izinhlobo ezimbili: uhlobo olomile izinhlanzi pellet mill nohlobo olumanzi okondlayo okudlayo. Umshini wokulungisa wokuphakelwa kwezinhlanzi ohlotshaniswa ngohlobo olunamanzi onomshini wokubhoboka kanye nesidingo sokuhlomisa i-boiler yesikebhe. Umshini wokulungisa izinhlanzi wokudla owomile ushibhile ngenkathi umthamo wohlobo oluwumshini wokukhiqiza izinhlanzi olwandle olintantayo luphezulu, ngakho-ke imishini yokukhiqiza yezinhlanzi eyondlayo enamanzi emanzi ilungele ifektri enkulu yokuphakelwa futhi uhlobo lomshini wokuphakela wokuphaka izinhlanzi lungcono futhi lube nomnotho kumsebenzisi omncane noma osezingeni eliphakathi nendawo.
Dry Ama-pellets ezinhlanzi zokudla ezomile
I-mesh yebhande yethu eyomile iyisomisi sebhande eliguqukayo eliqhubekayo. Amaphaneli akhiwa ngomshini wokuphaka wezinhlanzi okuntantayo afakwa ezingxenyeni ezisebenza ngocingo noma ngocingo lwebhande lepetrol futhi ahanjiswa ngokuqhubekayo ngamakamelo wokomisa. Ngale nqubo, umoya wokumisa udluliswa kaninginingi ngokusebenzisa ungqimba lwemikhiqizo kuze kube yilapho ama-pellets enokuqukethwe kokuswakama okukhulu ngaphambi kokushiya owomile. Ngenkathi uma ukhetha umshini wokukhiqiza izinhlanzi ezintantayo wohlobo lwentaba, sincoma ukomisa uhlobo lwegesi.
Pack Ukupakelwa kwepellets yezinhlanzi
Ukwenza ama-pellets aqediwe kalula ukuwagcina, ukuthutha nokubamba amehlo amaklayenti, kufanele apakishwe kahle. Ngobuchwepheshe bethu isisindo nomshini wokupakisha, amapelethi aqediwe angafakwa emgqonyeni, isisindo, kudlulisiwe, futhi uphawu ngokuzenzakalelayo, okusindisa abasebenzi nesikhathi kakhulu futhi kuhlangatshezwane nezidingo zokukhiqizwa kwamanani amakhulu. Lomshini wokupakisha, ikhodi yokuthayipha yokushisa okuzenzakalelayo, ukuthungwa kwesikhwama okuzenzakalelayo nokusika intambo okuzenzakalelayo kungaba yimisebenzi yokuzikhethela.